सम्भोग गर्नु अघि पुरूषले जान्नैपर्ने ४ कुरा — Imandarmedia.com
सम्भोग गर्नु अघि पुरूषले जान्नैपर्ने ४ कुरा
एजेन्सी। सेक्सका बारेमा महिला पुरुष दुबै धेरैभन्दा धेरै कुराहरु जान्न चाहान्छन् । तर उनीहरु कुरा गर्न लजाउँछन्। सुखद दापत्य जीवनको कल्पना गर्न चाहानुहुन्छ भने र परिवारमा आपसी सझदारी बढाउन चाहानुहुन्छ भने यस्ता कुराहरु श्रीमान र श्रीमतीबिच हुनुपर्छ।
बेडमा भएको बेला मानिसहरु सेक्स गर्न आतुर हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पुरुषले महिला र महिलाले एक अर्कालाई कसरी सुखानुभुत गराउन सकिन्छ त्यसबारे उनीहरुले एकअर्कालाई बुझ्नुपर्छ। युवतीहरुसँग स्ट्रोङ सेक्स गर्न छ भने यी कुराहरु पालन गर्नुपर्छ।
१. धेरै मानिसहरुलाई लाग्नसक्छ लामो समयसम्म सेक्स गर्यो भने धेरै मज्जा आउँछ। तर तपाईको यो विचारलाई अमेरिकामा रहेको पेन स्टेट विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनमा सेक्स १४ देखि १५ मिनेटसम्म उत्तम हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
२. सेक्स गरिरहेको बेला जब महिलाहरु आवाज निकाल्ने गर्छन् उनीहरु आफ्नो सेक्स साथीलाई अर्गाजम झन् धेरै बढाउन कोसिस गर्छन् । यसको अर्थ यो हो कि उनीहरु झन् सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहान्छन्।
३. सेक्स गरिसकेपछि नांगै सुत्नु उचित हुन्छ । यदि सेक्स पछि सफा गर्ने काम गरिएन भने त्यसले पछि समस्या ल्याउने अध्ययनले देखाएको छ । यदी तपाईको यौनअंगबाट गनाउने बासनाहरु आएको छ भने तुरुन्त डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्
४. मिठो निन्द्रा निदाउन हरेक श्रीमान श्रीमती सेक्स गर्ने गर्छन्। डाक्टरले पनि निन्द्रा लाग्दैन भने सेक्सको साहारा लिन आग्रह गर्छन्। तेस्तै,पुरुषको यौनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ल्वाङ्ग महत्वपूर्ण मानिएको छ।
ल्वाङ्ग सामान्यतयाः घरमा खानाका विभिन्न परिकार तयार पार्दा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भान्सामा अत्यधिक प्रयोगमा आउने ल्वाङ्ग एक प्रकारको मसला नै हो । यसले खानाको स्वाद बढाउने र बास्दादार बनाउने काम गर्छ ।
तर, यसले स्वाद बढाउने काम मात्र गर्दैन स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका फाइदाहरु पनि पुर्याउँछ । ल्वाङ्गले पाचन प्रक्रियालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ । कब्जियतको समस्या पनि कम गर्छ ।यसमा भरपुर मात्रामा फाइबर हुने भएकाले यसले रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि बढाउने काम गर्छ। ल्वाङ्गमा भरपुर मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट पाइन्छ । जसले गर्दा धेरै प्रकारका रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
यसले मधुमेह र क्यान्सरजस्ता रोगबाट पनि बचाउँछ । यसको सेबनले पाचन प्रक्रिया स्वस्थ रहन्छ भने चिसो मौसममा हुने समस्याहरुबाट पनि बचाउँछ । पुरुषहरुका लागि यसको धेरै नै फाइदा छ ।म्याग्नेसियम, पोटासियम, एन्टिअक्सिडेन्ट, फस्फोरस जस्ता तत्वहरु पाइने भएकाले यसको सेवनले पुरुषहरुका यौनसम्बन्धी समस्याहरुबाट छुटकारा मिल्छ । यसको सेवनले शरीरमा आइरन र क्याल्शियमको कमी हुँदैन।
खाली पेटमा ल्वाङ्गको सेवन गर्दा पाचन प्रक्रिया तन्दुरुस्त रहन्छ ।ल्वाङ्गको सेवन दिनमा २ देखि ३ वटा मात्रै गर्ने गर्नुपर्छ। अधिक मात्रामा यसको सेवनले नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ।विशेषज्ञका अनुसार पुरुषमा शुक्रकिटको मात्रा बढाउनु छ भने यसको सेवन गर्न आवश्यक छ। यसले तनावलाई टाढा राख्छ। यसलाई बिहान खाली पेटमा मनतातो पानीसँग खान सकिन्छ।
यौनका कुरा : महिलाले कसरी चरम सुख कसरी प्राप्त गर्छन् ?के भनिन्छ भने, अक्सर दम्पतीको खटपट ओछ्यानबाट सुरु हुन्छ । फिका यौन-जीवनले दम्पतीको सम्बन्ध सुमधुर रहँदैन । त्यसैले दाम्पत्य सम्बन्धमा यौनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, केवल राम्रो चुम्बनका लागि मात्र होइन राम्रो फोरप्लेका लागि पनि तपाईंंले आफ्नो स्वासलाई लयबद्ध बनाउन जान्नुपर्छ । तपाईंंले जब आफ्नो पार्टनरलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ । त्यो समयमा पार्टनरलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै, तपाईंंको पार्टनरलाई उत्तेजित गर्न सासले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईंंलाई थाहा हुनु आवश्यक छ।
चुम्बनपछि अन्य क्रियाकलाप जस्तै घाँटीहरुमा पनि चुम्बन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले तपाईंंको पार्टनर छिट्टै मुडमा आउँछिन् र यौन क्रियाकलापमा आफ्नो सहभागिता पनि जनाउँछिन् । घाँटीको वरपर चुम्बन गर्दा लामो समयसम्म चुम्बन गर्दै आफ्नो तातो सासको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।
महिलाहरुलाई मुडमा ल्याउनका लागि र यौन कियाकलापमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि ओरल सेक्सले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । तपाईंंले गर्नुभएको ओरल सेक्सले तपाईंंको पार्टनरलाई चरम सुख प्राप्त हुन्छ।
भजाइनल स्टिम्युलेशनले महिलाहरु पूर्णरुपमा मदहोस् हुन्छन्। त्यस्तो स्थितिमा उनीहरुसँग यौन सम्बन्ध राख्न उपयुक्त हुन्छ। यौन सम्बन्ध राख्नका लागि यो सही समय हुन्छ। किनभने यो स्थितिमा कपलले यौनसम्पर्कको अत्याधिक आनन्द लिन सक्छन्।
महिलाले चरम सुख कसरी प्राप्त गर्छन् ? जब कुरा चरम सुख प्राप्तिको हुन्छ, यसका विभिन्न तरिकाहरु छन्। हिजोआज त इन्टरनेटको माध्यमले पनि तपाईंं कसरी चरम सुख प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर, महिलाहरुलाई भजाइनल अर्गेज्म प्राप्त गर्न सजिलो छैन, किनभने यो कुनै नियम पुस्तक होइन, जसको आधारमा चरम सुख प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै महिलाहरुलाई केवल पेनिट्रेसनले मात्र पनि चरम सुुख प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।
यौन क्रियाकलापको माध्यमबाट खुशी, सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुछ भने यौन पूर्व गरिने क्रियाकलापमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यौनसम्पर्क राख्नु अगाडि शारीरिक र मानसिक रुपमा आफू र आफ्नो पार्टनरलाई तयार गर्ने तरिकालाई फोरप्ले भनिन्छ। चुम्बन, मसाज गर्नु, पार्टनरलाई कसेर अंगालोमा बाँध्नु जस्ता सबै कुराले तपाईंलाई यौनका लागि तयार गर्न र चरम सुख प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ। फोरप्लेको माध्यमबाट महिलाहरु आनन्दको महसुस गर्छन र यौन सम्पर्कका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा रमाउन थाल्छिन्।
आफ्नो शरीरलाई यौन र चरम सुखका लागि तयार गर्ने अर्को राम्रो तरिका सेल्फ लभ अर्थात् मास्टरबेसन हस्तमैथुनका केहि तरिकाहरुलाई अपनाएर आफूलाई कुन कुराले धेरै खुशी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंंको सेक्स पार्टनरसँग डर्टी टक गर्न, यौन सम्बन्धित खेल खेल्दा र विभिन्न किसिमका सेक्सुअल आवाज निकाल्नु तपाईंंको लागि अति नै फाइदाजनक हुन्छ भन्दा तपाईं आश्चर्यमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता सबै कुराहरुले पनि तपाईंंलाई चरम सुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ।
प्रायः महिलाहरु आफ्नो शरीरको विशेष अंग अर्थात् भजाइनामा ध्यान नदिने गल्ती गर्छन। जब आफ्नो भजाइनाको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ। तब तपाईंंलाई पेनिट्रेशनको माध्यमले तपाईंं भिन्दा-भिन्दै किसिमका चरम सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले आफ्नो बारेमा पनि थाहा पाउन आवश्यक छ।
यो पनि : कुकुरको बारेमा यी रोचक तथ्य: सायद तपाईंलाई थाहा छैन कुकुरको बारेमा यी रोचक तथ्य: सायद तपाईंलाई थाहा छैन,कुकुर सबैभन्दा इमान्दार तथा बफादार प्राणी मानिन्छ।त्यसैले कुकुरले जनावरहरुमा सबैभन्दा धेरै मानिसको माया पाउन सफल भएको छ र भाग्यमानी कुकुरहरु दुनियाका करोडौँ गरीब मानिसहरुको भन्दा भव्य जिवनशैली बाँचिरहेका छन्।
मानिसले कुकुरलाई गर्ने मायाका विभिन्न उदाहरण पाइन्छन्।कतै मानिसले आफूले पालेको कुकुरलाई नै बिहे गरेको समाचार पनि सुनिन्छ भने कतै कुकुरलाई आफूसँग राख्न नपाउँदा लोग्नेसँग डिभोर्स गरेको खबर पनि आउँछ। यस्तो भाग्यमानी कुकुरहरुका बारेमा केही रोचक तथ्य यस्ता छन्:
झण्डैै ३० हजार वर्ष पहिलेदेखि मानिसले कुकुरलाई घरपालुवा जनावर बनाएको हो। कुनै समय कुकुर र भेँडाको वंशज एउटै थियो। त्यसैले आज पनि यी दुई प्राणीको डिएनए ९९ दशमलव ९ प्रतिशत मिल्छ।
मानिसको रक्तसमूह ४ प्रकारको हुन्छ, जबकी कुकुरको रगत १३ प्रकारको हुन्छ। अन्तरीक्षमा जाने पहिलो जनावर कुकुर हो, जसको नाम लाइका हो ।सन् १९५७ को नोभेम्बर ३ मा सोभियत संघले लाइकलाई अन्तरीक्षयानमा हाली अन्तरीक्षमा पठाएको थियो।
तर अन्तरीक्षयानमा अत्यधिक गर्मीका कारण उसको मृत्यु भयो। आमिर खानसँग एउटा यस्तो कुकुर छ, जसको नाम शाहरुख खान हो ।· एउटा कुकुर २ वर्षको मानिसको बच्चाजत्तिकै बुद्धिमान हुन्छ र त्यसलाई डेढ सय शव्द सिकाउन सकिन्छ।
मानिसका अलावा कुकुर मात्रै यस्तो जिव हो जसले आँखामा हेरेर मानिसको हाउभाउ पहिचान गर्न सक्दछ। कुकुरको सुँघ्ने शक्ति मानिसको भन्दा १ हजार गुणा बढी हुन्छ । तालिम प्राप्त कुकुरले सुँघेर विभिन्न रोगका साथै विस्फोटन पदार्थ र लागुऔषधि पनि पत्ता लगाउन सक्दछ।
आइसल्याण्डमा घरपालुवा कुकुर राख्नु गैरकानूनी हो। त्यस्तै अमेरिकाको ओक्लोहामामा कुकुरलाई जिस्काउनु गैरकानूनी हुन्छ। चकलेट खानाले कुकुरको मृत्यु हुनसक्छ। चकलेटमा हुने थियोब्रोमाइन नामक पदार्थले कुकुरको रक्तसंचारमा असर पार्छ।
कुकुरले ६२ दिनसम्म आफ्नो बच्चालाई गर्भमा राख्दछ। जन्मिने बेलामा कुकुरको बच्चा अन्धो, बहिरो तथा दाँत नभएको हुन्छ। गि्रस र बुल्गेरियाबीच कुनै समय एक गि्रक कुकुरले बुल्गेरियाकेा सिमाक्षेत्र पार गरेकेा विषयलाई लिएर युद्ध भएको थियो।
कुकुरले निदाएको बेलामा मान्छेले जस्तै सपना देख्छ। सानो कुकुरले हरेक १० मिनेटमा एउटा सपना देख्दछ भने ठूलो कुकुरले एक घण्टामा एउटा सपना । १० वर्षभन्दा पाको उमेरका कुकुरहरु मध्ये ५० प्रतिशत क्यान्सरकै कारण मर्दछन्।
मानिसजस्तै कुकुरहरु पनि मोटोपनाका सिकार हुन्छन्, प्रायः पश्चिमा देशका कुकुरहरु । कुकुरले दायाँतर्फ पुच्छर हल्लाउने ऊ खुसी हुनुको लक्षण हो, त्यस्तै बायाँतर्फ हल्लाउनु डराएको लक्षण हो। विस्तारै हल्लाउनु भनेको उसले संकोच मानिरहेको छ र जोडसँग हल्लायो भने ऊ रिसाएकोे बुझ्नुपर् ।
प्रायः गाडी गुड्दा कुकुरहरु किन गाडीको पछाडि भुक्दै दौडिन्छन् ? मानौँ उनीहरु गाडीमाथि आक्रमण नै गर्दैछन्। यसको रोचक कारण छ। प्रायः कुकुरहरुले रोकिएको गाडीको टायरमा पिसाब गरेर आफ्नो इलाका तय गर्छन्।
यसरी आफ्नो सिमानाको रुपमा रहेको गाडी गुडेर जाँदा कुकुरहरुले आफ्नो सिमाना कसैले खल्बलाइदिएको र आक्रमण गर्न थालेको अनुभव गर्छन्। जसलाई कुकुरले सहन सक्दैन र गाडीहरुको पछि दगुर्छन्।